नायिका श्वेताको उजुरी पछि काजी पक्राउ ! गरेछन् गर्नै नहुने यस्तो काम – Online Khabar 24
नायिका श्वेताको उजुरी पछि काजी पक्राउ ! गरेछन् गर्नै नहुने यस्तो काम
नायिका श्वेता खड्कासँग पैसा लिएर फिर्ता नगर्ने एक व्यवसायी प’क्राउ परेका छन।
प्रहरीका अनुसार नायिका खड्कासँग ८६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर फिर्ता नगर्ने जग्गा कारोबारी चितवनका काजी गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
गुरुङले पैसा फिर्ता गर्ने नाममा बैंकमा पैसा नै नभएको चेक दिएका थिए। पैसा नपाएपछि नायिका खड्काले प्रहरीमा चेक बाउन्सको मु’द्धा हालेकी थिइन्।श्वेताको उ’जुरीसँगै काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले गुरुङलाई प’क्राउ गरेको छ। एक हप्ताअघि पक्राउ गरेर उनीमाथि अनुस’न्धान जारी राखेको प्रहरीको भनाई छ।
आँशुको समुन्द्रबाट उभिएर श्वेता दोश्रो बिवाह पछि दरिलो हुँदैछिन् । उनकै भाषामा भन्ने हो भने उनी बो’ल्ड भएकी छिन् । त्यसैले त थुप्रै एकल महिलाहरु आइकन सम्झेर श्वेतालाई भेट्न आइपुग्छन् । त्यस्ता मानिसलाई श्वेता सम्झाउँछिन्, ‘लाइफलाई त्यसै किल गर्नु हुँदैन । कर्नुपर्छ समयले सबै कुरा सिकाउँछ ।’
नारीले अवसरको पाए जेसुकै गर्न सक्ने तर्क गर्छिन् । ‘एउटा नारी नभएको घर र नारी भएको घर हेर्नुस्, थाहा भइहाल्छ की नारी कति सिन्सीयर हुन्छन् भन्ने’, श्वेता बोल्ड बोल्छिन् । साभार गरियको खबर
Prev२४ वर्षीया युवतीको लाजमर्दो हर्कत ! पक्राउ परेपछी खुल्यो यस्तो पोल